Homeसमाचारछवि- शिल्पाबारे राजेन्द्रले मु’ख खोल्दै भने ‘अंश दिएर केस स’ल्टाउ’ (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 21, 2021 admin समाचार 5339
चर्चित कला’कार राजेन्द्र खड्गी पछिल्ला दिनमा सा’माजिक संजाल र अन्तरवार्ता दिने काममा स’क्रिय बनेका छन् । स्पष्टवक्ता ख’ड्कीले शिल्पा छवी प्रकरणमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले छवि ओझा’लाई सुझाव दिंदै भने, शिल्पा बहिनी संग पैसा दिएर यो केस सल्टाए हुन्छ नत्र बुढेस’काल मा एकदम दुख पाइन्छ अदालत धाउँदा । मैले त भोगे’कोले भनेको हुँ है ।
छवि ओझाले शिल्पा पो’खरेल संगको केस अहिले चर्को तरिकाले सामाजिक संजालमा भाईरल बनि’रहेको छ । शिल्पा पोखरेल र छवि ओझा बीच को विवाद मिलेर सल्टाउन राजेन्द्र खड्गीले सुझाव दिंदै अन्त’र्वार्तामा किशोर खतिव’डालाई समेत दनक दिएका छन् । ओएस नेपालबाट
र’क्सी खाँदै दोहोरी जादै सचिनको पैसा उ’डाउने ? हिजो दुखमा छोरा छो’ड्ने आज सुखमा छोरा सम्झने कस्ती आमा ? (भिडियो सहित)
May 14, 2021 admin समाचार 6301
February 1, 2021 admin समाचार 6604
March 29, 2021 admin समाचार 5169
गायिका ज्योति मगर समय–समयमा चर्चा’मा आइरहन्छिन् । स्टेज प्रस्तुति, क’पडा पहिराई, विभिन्न पकृतिका अभिव्यक्तिलगायतका कारण उनी चर्चामा आइरहन्छिन् । उनको नीजि जी’वनबारे जान्ने इच्छा धेरैलाई हुनसक्छ । जान्ने इच्छा हुनुपनि अस्व’भाविक होइन । किनकी ज्योति